Mhando dzakasiyana dzekudhinda musoro dhizaini, Ricoh, Konica. High nemazvo otomatiki system. Yakagadziriswa anti-kudhumhana system. Shandisa LED kutonhora kutonhora kurapa tekinoroji, hwakareba hupenyu hwehupenyu, yakaderera simba kushandiswa. Akangwara ingi pamwero aramu hurongwa.
inonyanya kuzivikanwa muhombe UV flatbed bhodhoro purinda M ...
Tatu, purinda mbozhanhare s ...
Yakakwira mhando 3D Dhijitari Inkjet UV Flatbed Dhinda ...
Chigadzirwa paramende ...
Chigadzirwa paramende Model ...
Chigadzirwa paramende Mo ...
UV Flatbed Printer C + W + Varnish UV Printer yeP ...
1. Ingi yakanaka ndiyo kiyi kune ...
Kudhinda muchina chiratidzo printa uv flatbed
Guangzhou MSERIN Technology Co, Ltd. inounganidza matarenda epamusoro uye zviwanikwa zvehunyanzvi muindjet yekudhinda indasitiri, inovhara maindasitiri senge nharembozha, kuputira zvipfeko, girazi, simbi, uriri hwehuni, siringi, madziro ekumashure, zviratidzo zvekushambadzira, kurongedza waini. uye kurongedza tii. Iko kudikanwa kwekudhinda kwemavara kwakakosha, tichitarisa paR & D, kugadzira uye kusimudzira kwemhando yepamusoro, yakasimba-kugadzikana, uye inodhura-inoshanda michina yekudhinda.
Mutsva weNew UV UV Kudhinda —– 9060
Ndira / 10/2021
Kugadziriswa kwenhoroondo yekudhinda yedhijitari. Pinda paMusika Wepasi Pese Ne UV LED maPrinta. Mserin maprinta matsva, pane musika wakakura wepasi rese wekudhinda kuti utore. Musika uyu unofambiswa nekukura kwakakura muKuseri kwemadziro ekushongedza imba uye Kushambadzira indasitiri. T ...
Innovation kushambadzira kwekushandisa kwemafoni kesi
A3 UV Printer Solution muPhone Case Munda Iwe uri munzvimbo chaiyo yefoni kesi yekudhinda muchina. Boost Yako Foni Yenyaya Kudhinda Bhizinesi Izvozvi! Iwe une chokwadi chekuiwana muM Mserin. Isu tiri UV printer mugadziri muGuangzhou, China. Mafoni achangoburwa anotaridzika kunge akanaka ...
LED UV Printer Solution muAcrylic Munda
Acrylic ine yakatsetseka yekudhinda pamusoro uye dhizaini uye yakadhindwa mifananidzo ine yakajeka mavara, saka inoshandiswa zvakanyanya kune acrylic signage, mapikicha mafoto, ekuratidzira mabhodhi, masuo emapango, zviratidzo zvemugwagwa, mabhodhi ekuzivisa, etc. Mhinduro yakanaka yekudhinda inogona kuwedzera kukosha kwe prod ...